Fifamoivoizana : Mihatsara ny lalana Fianarantsoa-Ambalavao
Afa-pasahiranana ireo mpitatitra manao zotra mampitohy ny kaominina roa tonta amin'izao fotoana izao. Tontosa ao anaty ny adiny iray sy fahefany izany ampahan-dalana amin'ny lalam-pirenena fahafito izany raha adiny roa mahery no nanaovana azy teo aloha Nisy ny fanamboarana ireo faritra nahitàna fahasimbana lehibe ka misosa kokoa ny fifamoivoizana amin'ireny toerana ireny ankehitriny. Ny tetezana ao Morafeno hiditra an'Ambalavao sisa no mampanahy fa ny eo Soaindrana kosa dia efa azo ihafiana hoy ireo mpitatitra.
lundi, 30 janvier 2017 10:29
Tahirin-tsary Sobika Sambava
Andapa Ambodiangezoko: Renim-pianakaviana avy namonjy lanonam- piangonana nilatsaham-baratra.
Maty tsy tra-drano raha avy tany Bemanevika avy namonjy lanonam-piangonana ity Kristianina ity ka hikasa hody any Ambodifamelona Ambodiangezoko. Nony tao anelanelan-dalana izy no nirotsaka ny horam-baratra ary nifatratra tany aminy ny varatra, roa izy ireo no niaradia tamin'izany fa izy no maty tsy tra-drano fa ny iray kosa dia natsipin'ny varatra teny antanim-bary fa mbola avotra ity farany. Omaly alahady 29 janoary teo amin'ny 4ora hariva teo no nisehoan'ity tranga mampalahelo ity. Masiaka ny varatra aty Sava amin'izao fotoana izao ary efa manomboka mikotroko izany tamin'ity herin'andro ity.
dimanche, 29 janvier 2017 23:33
Mandraka: Tapaka nandritra ny 20 ora ny lalana
Tamin'ny zoma tokony tamin'ny 8 ora alina no nisy kamiao mpitondra kaontenera izay nitsivalana teo amin'ny fiholanana lehibe antsoina hoe S. Niitsivalana ilay kamiao, dia tapaka tanteraka ny lalana na ho an'ny hiakatra Antananarivo, na ny ho any Toamasina, tamin'ny lalam-pirenena faha 2. Tsy tonga ny tompony sy ny Zandary raha tsy ny sabotsy misadratr'andro. Tsy afaka teo anefa ilay kamiao raha tsy ny sabotsy tolak'andro tamin'ny 4 ora, ary tsy afaka ny fitohanana raha tsy tamin'ny 6 ora hariva noho ny tsy fifandeferana teo amin'ny kamiao misisika. Saika efa ny sabotsy nisasakalina mahery avokoa vao tonga ireo fiara mpitatitra nihazo an'i Toamasina izay niainga ny zoma, satria dia nihitsoka teo Mandraka nandritra ny 20 ora, ary tsy nisy nijery na nandray andraikitra ara-potoana.
dimanche, 29 janvier 2017 17:26
Sambava: Zaza nihanika manga, maty voatsatoky ny antsy
Zaza nihanika manga niaraka tamin'ny antsy satria te hihinana eny ambony eny izy. Tampoka teo dia nibolisatra ka latsaka avy teny ambony fa ny kiso (antsy) teo amin'ny tanany dia tsy votsotra ka niara-nohentiny latsaka ary iny antsy kely iny no nijodina nitsatoka tamin'ny tendany. Natao ihany ny ala nenina fa rehefa tonga tao amin'ny hopitaly Bemanevika dia maty ity tovolahy eo amin'ny 15 taona ity. Androany no hanaovana ny fandevenana ity zandry kely zanak'atoa Naivo monina ao Ambatojoby ity.
dimanche, 29 janvier 2017 16:20
Mahamasina : Ambohimpihaonan’ny mpino Katolika
Lamesa lehibe no tanterahina eo amin’ny kianjabe Mahamasina-Antananarivo anio alahady 29 janoary 2017, hanamarihana ny faha-50 taonan’ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin’i Madagasikara sy ny Fiketrahana Masina. Eto an-toerana mitarika ny fotoam-pivavahana ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny Fiketrahana Masina, Kardinaly Pietro Parolin, izay mitsidika an’i Madagasikara ny 26 ka hatramin’ny 1 febroary 2017 izao.
dimanche, 29 janvier 2017 15:49
Tsararano Ambony-Mahajanga : Novonoiny ho faty ny rafivaviny dia iny izy no nitsoaka
Vehivavy roa no niady lehilahy iray ka ny sakaizan-drangahy indray ity namono ny tompon-bady ity. Niainga avy amin’ny fifamaliana ny resaka ny zoma teo ary niafara tamin’ny fikasihan-tanana ka maty ilay ramatoa tompom-bady. Nirifatra nitsoaka izy rehefa nahare fa niantso ny mpitandro ny filaminana ireo olona manodidina hisambotra azy. Ilay lehilahy sakaizany no voatery nosamborin’ny fianakavian’ilay ramatoa maty mba ahafahana mitady ilay nahavanan-doza. Efa eo ampelan-tanan’ny mpitandro ny filaminana ny raharaha amin’izao ary mandeha ny fikarohana ity farany.
samedi, 28 janvier 2017 22:00
Fianarantsoa: Nahazo orana tao anatin'ny roa andro ny fambolena ifotony
Velombolo ireo mpamboly vary izay niandry izany ho matoy tsara vao miditra amin'ny fijinjàna. Orana roa andro izao no efa nirotsaka teto amin'ny tananan'i Fianarantsoa sy ny manodidina ka ny fiandohan'ny herinandro ho avy vao afaka mijinja ireo mpamboly vary, somary tara ny tetiandrom-pamokarana. Mitohy ny kotroka sy ny rotsak'orana eto an-tanàna amin'ity andron'ny sabotsy ity. Afaka ny haintany sy ny tanin'andro manevokevoka aloha hatreto.
samedi, 28 janvier 2017 21:28
Anjozorobe: Vokatry ny fandehanana mafy?
Hatreto dia 47 no maty ary 24 naratra tamin'ilay lozam-piarakodia tao Anjozorobe anio maraina 28 janoary 2017. Naratra kely ny handrin'ilay mpamily fa anisan'ireo tafavoaka tao anaty rano izy. Raha ny fanadihadiana voalohany dia vokatry ny fandehanana mafy no nampivarina ity kamiao nitondra fianakaviana resaka mariazy ity. Tsy voatanany ny familiana rehefa niditra fiolanana, nefa nisy tetezana 6m ny haavony nitsena azy tao. Mbola mandeha moa ny fitadiavana ireo tsy mbola hita, ary ho fantatra eo ihany ny tena marina rehetra. Hatreto dia efa mipetraka ny fanontaniana hoe, nahoana ny kamiao mpitondra entana no hitondra olona 50 hamonjy mariazy?
samedi, 28 janvier 2017 20:37
Fiangonana Apokalipsy : Nitohy teto Mahajanga ny fankalazana ny faha-20 taonany
Famaranana ny fampianarana ny bokin’ny Apokalipsy tao amin’ny fahitalavitra Viva sy ny onjam-peo Fanambarana eto Mahajanga rehefa naharitra enim-bolana no nanamarihana io faha 20 taonan’ny Fiangonana tarihin’ny Pasteur Mailhol io androany. Nisy koa fanaovana batisa olona miisa 60 mianadahy mahery resy lahatra fa hanaradia ity finoana ity.
samedi, 28 janvier 2017 15:09
Anjozorobe : Kamiao nivarina anaty rano, maro ny maty
Nitondra olona efapolo avy namonjy lanonana ity fiarabe ity no nivarina ao anaty rano eo ampidirana atsimon’ny tanànan’Anjorobe io maraina io. Maro ny namoy ny ainy. Mitohy ny famonjena sy fikarohana ireo olona ao anaty rano.
Page 287 sur 425